My World: ဒီလှိုင်းကိုဆန့်ကျင်၍ (မေမေ့ရဲ့စာ)
နေထိုင်တဲ့သူအားလုံးကော အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တာဝန်ရှိသူများပါ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့ တာဝန်ယူသင့်တယ်။
ဖြိုးရဲ့စာကောင်းလေးတွေကို မိုဘာမှာလည်း ဖတ်စေချင်လို့ www.moba4all.org ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်ဆိုက်လေးမှာ လာတင်ပေးဖို့ ဖိတ်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါနော်။
ထိုင်းအကြောင်းဖတ်မိတိုင်း ရင်မောမိတယ် ဖြိုးဖြိုးရေ။
တိုတောင်းတဲ့လူ့ဘဝမှာအပြစ်သားမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့စကားလေး တန်ဘိုးရှိလာတာနော်။ စာကောင်းပေကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
သဘာဝတရားကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ ဒဏ်ချက်တွေကလည်း အင်အားကြီးမားလွန်းတော့ လူသားတွေက မကာကွယ်နိုင်ဘူးနော်။ ဖြစ်ပြီးမှဘဲ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွေ လုပ်ကြရတော့မယ်. ကမ္ဘာကြီးလဲ ယိုယွင်းလာပြီ. ဟိုနေရာမှာ တစ်ခုဖြစ်လိုက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခုဖြစ်လိုက်နဲ့.. ကြားရတဲ့သတင်းတွေက စိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူး။။ ထိုင်းရေဘေးကနေ အမြန်ဆုံး ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရုံကလွဲပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှ ဝင်မကူညီနိုင်ဖြစ်နေရတယ်
ထိုင်းလဲ ဘဝပျက်နေတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့...
သဘာဝဘေးဆိုးတွေကို ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ ပိုကြားလာရပြီနော်...
ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အကုန်ခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အခုရေတွေကြီးနေပြီးမဖြိုး။ လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။
အားပါး ထိုင်းမှာနေတဲ့ သူတောင် လက်ဖျား ခြေဖျား ခါသွားတယ် အစ်မ ဖြိုးရေ....။
တနင်္ဂနွေမှာ ဆည်ရေလွတ်မယ် ကြားနေလို့ ။ သောက်ရေနဲ့စားစရာတွေ စုနေလိုက်တယ်။ သတိတရ မေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မဖြိုး။